ဒိုမီနီကာနိုင်ငံ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ နှင့် မရောထွေးပါနှင့်။
ကိုဩဒိနိတ်: 15°25′N 61°20′W﻿ / ﻿15.417°N 61.333°W﻿ / 15.417; -61.333
ဒိုမီနီကာ (အင်္ဂလိပ်: Dominica; /ˌdɒmɪˈniːkə/ DOM-ih-NEE-kə သို့မဟုတ် /dəmˈɪnɪkə/ DƏM-ih-NIH-kə; ပြင်သစ်: Dominique) ၏ တရားဝင်အမည်မှာ ဒိုမီနီကာဓနသဟာယနိုင်ငံ (Commonwealth of Dominica) ဖြစ်ပြီး ကာရစ်ဘီယံပင်လယ် အတွင်းရှိ ကျွန်းနိုင်ငံ တစ်ခုဖြစ်သည်။ မြောက်-အနောက်မြောက်ဘက်တွင် ဂွါဒီလု (Guadeloupe)၊ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် မာတီနစ် (Martinique) တို့ တည်ရှိသည်။ ဧရိယာစတုရန်းကီလိုမီတာပေါင်း ၇၅၀ ရှိပြီး အမြင့်ဆုံးတောင်မှာ အမြင့် ၁၄၄၇မီတာရှိသော ဒိုင်ယာဘလော့တင်တောင်ထွတ် (Morne Diablotins) ဖြစ်သည်။ ခန့်မှန်းလူဦးရေ ၇၂,၅၀၀ ရှိပြီး မြို့တော်မှာ ရိုဆူးမြို့ (Roseau) ဖြစ်သည်။
ဆောင်ပုဒ်: "Apres Bondie, C'est La Ter" (Dominican Creole French)
နိုင်ငံတော် သီချင်း: Isle of Beauty, Isle of Splendour
ဒိုမီနီကာနိုင်ငံ၏ တည်နေရာ (အနီရောင်စက်ဝိုင်းတွင်း)
၈၆.၆% လူမဲ (အာဖရိကန်)
၁.၃% ဥရောပ သို့မဟုတ် အခြား
၃% Folk religion
ပြည်ထောင်စု ကြီးစိုးပါတီ ပါလီမန် သမ္မတနိုင်ငံစနစ်
လွတ်လပ်ရေး ယူနိုက်တက် ကင်းဒမ်းမှ
• အနောက်အိန္ဒိယ ပေါင်းစည်းနိုင်ငံ
၁၉၆၇ ခုနှစ် မတ်လ ၁ ရက်
• အချုပ်အခြာအာဏာနှင့် လက်ရှိ ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေ
၁၉၇၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်
၇၃,၅၄၃ (အဆင့် - ၂၀၄)
၁၀၅/km2 (၂၇၁.၉/sq mi) (အဆင့် - ၉၅)
ဒေါ်လာ ၆၈၈ သန်း
ဒေါ်လာ ၄၈၅ သန်း
မြင့် · ၉၄
အရှေ့ကာရစ်ဘီယံ ဒေါ်လာ (XCD)
နာမည်ပြောင်အဖြစ် ကရစ်ဘီယံကျွန်းသေးလေး ("Nature Isle of the Caribbean") ဟုအမည်ရသော ဒိုမီနီကာသည် သဘာဝအလှအပများ မပျက်စီးသေးပဲ ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ လက်ဆားအန်တီလီးစ်ကျွန်းစု (Lesser Antilles) တွင် အသေးငယ်ဆုံးတိုင်းပြည် ဖြစ်သည်။ ဘူမိဗေဒသဘောအရ မီးတောင်လှုပ်ရှားမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာရသောတိုင်းပြည် ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ဒုတိယအကြီးဆုံး ရေပူကန်ကြီး သည် ဒိုမီနီကာကျွန်းတွင် တည်ရှိသည်။ တောတောင်ထူထပ်သည်။ မိုးသစ်တောများ ပေါများသည်။ ရှားပါးအပင်၊တိရစ္ဆာန်၊ ငှက်မျိုးစိတ်များကို တွေ့ရသည်။ အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းဒေသများတွင်ခြောက်သွေ့ပြီး ကုန်းတွင်းပိုင်းတွင် မိုးရွာသွန်းမှု များပြားသည်။ တော်ဝင်အမေဇုန်ဆစ်ဆဲရိုးကြက်တူရွေးငှက် (Imperial Amazon|Sisserou Parrot) သည် ဒိုမီနီကာ၏ ထူးခြားသော ဝိသေသ ဖြစ်သည်။ ဒိုမီနီကာ အမျိုးသားအလံတွင် ယင်းကြက်တူရွေးငှက်ကို အသုံးပြုထားသည်။ ဒိုမီနီကာ၏ စီးပွားရေးသည် ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများပေါ်တွင် မှီတည်လျက် ရှိသည်။
ခရစ္စတိုဖာကိုလံဘတ်စ် (Christopher Columbus) က ယခုဒိုမီနီကာကျွန်းကို ၁၄၉၃ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၃)ရက်နေ့တွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ထိုနေ့ကိုအစွဲပြု၍ အမည်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လက်တင်ဘာသာစကားအားဖြင့် ဒိုမီနီကာဟူသည်မှာ တနင်္ဂနွေနေ့ ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ကိုလံဘတ်စ် တွေ့ရှိခဲ့ပြီး နောက် နှစ်ရာချီပြီး ကြာသည့်တိုင်အောင် ဒိုမီနီကာကျွန်းသည် သီးခြား တည်ရှိနေခဲ့သည်။ ဥရောပမှ ရောက်ရှိလာကြသော ကိုလိုနီနယ်ချဲ့များ၏ မောင်းထုတ်ခံရသော ဒေသခံ ကရစ်ဘ် (Caribs) များသည်ပင် ယင်းကျွန်းသို့ ရွှေ့ပြောင်းလာခြင်း မရှိခဲ့ပေ။ ၁၇၆၃တွင် ပြင်သစ်တို့က ဒိုမီနီကာကျွန်းကို အင်္ဂလိပ်တို့ထံ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ ၁၈၀၅တွင် အင်္ဂလိပ်တို့က အစိုးရအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပြီး ကိုလိုနီအဖြစ် အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။
ဗြိတိသျှအင်ပါယာ လက်အောက်တွင် ၁၈၃၄ခုနှစ် တစ်လျှောက်လုံး အာဖရိကန်များကို ကျွန်များအဖြစ် တင်သွင်းခဲ့သည်။ ၁၈၃၈တွင် ဒိုမီနီကာသည် ဗြိတိသျှကာရစ်ဘီယံဒေသတွင်း အာဖရိကန်အများစု ပါဝင်သော ဥပဒေပြုအဖွဲ့ကို ပထမဆုံး တည်ထောင်နိုင်သော တိုင်းပြည် ဖြစ်လာသည်။ ၁၈၉၆တွင် တော်ဝင်ကိုလိုနီနယ်မြေ (Crown colony) တစ်ခု အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ရာစုနှစ် ထက်ဝက်အကြာ ၁၉၅၈မှ ၁၉၆၂အတွင်း ကာလမကြာလိုက်သော အနောက်အိန္ဒိယဖက်ဒရေးရှင်း (West Indies Federation) ၏ ပြည်နယ်တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၈တွင် လွတ်လပ်ရေးရခဲ့သည်။
↑ Coat of Arms – Government of the Commonwealth of Dominica။
↑ Dominica Ethnic groups 2001 Census။ Cia.gov။ 30 January 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2013-09-29 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Pew Forum Research Data 2010 Archived 24 September 2015 at the Wayback Machine. Page 46. December 2012. Retrieved 28 May 2017.
↑ 2011 POPULATION AND HOUSING CENSUS (PDF)။ 8 June 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 29 ဩဂုတ်လ 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၆.၀ ၆.၁ ၆.၂ ၆.၃ Dominica။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့။
↑ 2015 Human Development Report။ ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ် (2015)။ 14 December 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "One woman's fight to get David Dimbleby to correctly pronounce Dominica"၊ 12 November 2014။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဒိုမီနီကာနိုင်ငံ&oldid=742765" မှ ရယူရန်
၈ မေ ၂၀၂၂၊ ၀၈:၅၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၈ မေ ၂၀၂၂၊ ၀၈:၅၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။